Maitiro Ekuita Anokwikwidza Kuongorora Yekuziva Yekubatanidza Kuvaka Tarisiro | Martech Zone
Iwe unowana sei nyowani backlink tarisiro? Vamwe vanosarudza kutsvaga mawebhusaiti pane imwe nyaya yakafanana. Vamwe vanotarisa madhairekitori ebhizinesi uye webhu mapuratifomu 2.0. Uye vamwe vanongotenga backlinks muhuwandu uye tariro yezvakanakisa.
Asi pane imwe nzira yekuvatonga vese uye ndeye mukwikwidzi kutsvagisa. Mawebhusaiti anobatanidza kune vako vanokwikwidza anogona kunge ari iwo zvine musoro. Uyezve, ivo vanogona kunge vakavhurirwa backlink kudyidzana. Uye vakwikwidzi vako vaita basa rese rekuzviwana, saka zvese zvaunofanirwa kuita kupinza mukati uye tora tarisiro yavo iwe.
Muchirongwa ichi, iwe unodzidza kuti ungawana sei vakwikwidzi vako vechokwadi, uwane yavo backlinks, uye kukwereta iwo ane kugona kukuru.
1. Tsvaga VaKwikwidzana Vako Vechokwadi
Chinhu chekutanga chekuita kuziva kuti vako vechokwadi vakwikwidzi vekutsvaga ndevapi uye sarudza akanakisa ekushora. Rangarira kuti vako vakwikwidzi vekutsvaga havana kufananidzwa neako chaiwo-epo makwikwi. Panzvimbo iyoyo, aya ndiwo mawebhusaiti anokwira kumusoro mumapeji ako ekutsvaga enjini dzekutsvaga (SERPs), kureva mazwi akakosha mune yako niche. Uku kutsvagisa kunogona zvakare kubatsira iwe kuona bhajeti inofungidzirwa remangwana rako link-yekuvaka mushandirapamwe.
Nzira yakapusa yekuona kuti vako vakwikwidzi vakakosha ndeipi kutaipa mbeu yako mazwi muGoogle uye nekuona kuti ndeapi maseru anoonekwa paGoogle SERP kazhinji. Iye zvino, iwe unowana mamwe asinganzwisisike mawebhusaiti, seMarume Hutano kana Forbes kana mamwe mararamiro emagazini ekumisikidza kwazvo niche mazwi, asi, mushure mekutsvaga kushoma, iwe unofanirwa kuve nerakanakisa zano rekuti ndiani arikushandisa mune yako niche.
Ehezve, kutarisa zvese zvako zvembeu mazwi akakosha uye kunyora pasi mawebhusaiti ayo anoverengerwa mazhinji haana kunyatsoshanda. Neraki, kukwikwidzana kuongorora chinetso chakajairika cheSEOs uye varidzi vewebhusaiti, saka kune akawanda maturusi ehunyanzvi anogona kukurumidza kuita izvi. Kana iwe urikutoshandisa chishandiso cheSEO, kungave kuri Moz, Semrush, kana Ahrefs, zvinogona kunge uine imwe nzira yemukwikwidzi yekutsvagisa yakavakirwa-mukati. Zvichienderana nechishandiso cheSEO chaunoshandisa, iwe unozogona kutsvaga ako ekutsvaga makwikwi kungave nemusoro wenyaya kana nedomain, kana dzimwe nguva zvese zviri zviviri.
Kuti uone makwikwi ako nemusoro wenyaya, iwe waizofanira kuisa mashoma embeu mazwi uye chishandiso chaizowana epamusoro mawebhusaiti akaiswa kune aya mazwi akakosha kazhinji. Iyi nzira inokutendera iwe kuti utore-sarudza iwo makiyi uye utarise vanokwikwidza mune yakamanikana niche.
Kuziva makwikwi nedomain, iwe unofanirwa kuendesa domain yako. Icho chishandiso chaizoongorora ese emazwi akakosha aunosarudza uye wozowana mawebhusaiti ane rakakura rezwi rakabatana. Iyi nzira inobvumidza iwe kuti uwane anokwikwidza mawebhusaiti ayo akafanana zvakanyanya kune yako webhusaiti, kunyangwe iyo niche ingave yakafara kupfuura iwe zvawanga uchida.
Paunenge iwe wawana runyorwa rwevanokwikwidza, mazhinji SEO maturusi aikubvumidza iwe kuti uvaongorore uchishandisa mhando yemhando metrics. Iwo akajairwa metric anosanganisira domain masimba, organic traffic, uye muzana yemakiyi ekupindirana kwemazwi, kureva kuti fananidzo webhusaiti yemukwikwidzi yakafanana neyako. Shandisa izvi metric kusarudza pakati pevashanu nevane gumi vepamusoro-mhando makwikwi ekuwedzera backlink kutsvagisa.
2. Tsvaga Vanokwikwidza Vako Backlinks
Paunenge iwe wauya pamwe nerunyorwa rwevanonyanya kukwikwidza vakwikwidzi, iwe unogona kufamba kuti uongorore yavo backlink profiles.
Yekukurumidza kutarisa kweanokwikwidza backlinks, unogona kushandisa chero backlink yekutarisa chishandiso. Nyora dhata remukwikwidzi kuti uone iwo chaiwo mapeji anobatanidza kune webhusaiti, ma URLs avanobatanidza nawo, anchor zvinyorwa, maseru madomasi, kunyangwe chinongedzo chiri dofollow kana kwete:
Kana iwe uchida kumhanyisa yakawedzera nzvero yeako makwikwi 'backlinks, iwe unozofanirwa kushandisa nyanzvi SEO software. Yekuzvipira yemukwikwidzi yekuongorora chishandiso inokutendera iwe kuti uongorore vakwikwidzi vanoverengeka panguva imwe chete, pamwe nefaera yakawanikwa backlinks nechiremera, nzvimbo, isina mafi ma tag, chirango njodzi, uye mamwe ma parameter:
Sezvineiwo, chimwe chezvakanakisa maficha ekutsvagisa backlink ndipo paunogona kuona kuti ndeapi mawebhusaiti anobatanidza maviri kana anopfuura emakwikwi ako. Aya mawebhusaiti ndiwo ako epamberi ekutanga backlink tarisiro - ivo vanowanzo shanda mukati meako niche uye kashoma kuve nehukama hwehukama nechero weavo vanokwikwidza.
3. Sarudza Iyo Yakasimba Yakanyanya Backlink Tarisiro
Paunenge iwe wadhonza runyorwa ruzere rwevanokwikwidza vako backlinks, iwe unogona kunge uine zviuru, dzimwe nguva makumi ezviuru eanotarisirwa mawebhusaiti. Izvo zviri pachena kuti zvakawandisa kumhanyisa mushandirapamwe wekusvitsa. Kunze kwezvo, kupofumadza nekukopota zvese zve backlink tarisiro yevanokwikwidza haisiyo yakanakisa zano, sezvo vamwe vacho vangangopa yakaderera-mhando backlinks iyo inokuvadza SEO yako chete.
Kupfupisa rondedzero yeako backlink tarisiro pasi kune saizi inokwanisika, unofanirwa kurasa mawebhusaiti ayo anopa yakaderera-mhando backlinks. Izvo zvakajairika zvinhu zvinoratidzira mhando yeiyo backlink tarisiro inosanganisira:
Domain chiremera. Iyo yepamusoro iri, zvirinani. Nzvimbo dzakakwirira dzemasimba ndiwo mawebhusaiti ayo pachawo ane backlinks mazhinji, zvemukati zvemhando yepamusoro, uye ruzivo rwakanaka rwevashandisi, uye nekudaro kupfuudza masimba mazhinji kuburikidza nehukama hwavo.
Dofollow / isina chinhu. Kusiyana nofollow zvinongedzo, dofollow zvinongedzo zvinokwanisa kupfuudza chinongedzo muto kune avo ekuenda mapeji. Nofollow zvinongedzo hazvisi zvisina basa zvachose, asi izvo hazvipe kune ako masosi. Zvakanaka kuve nezvisina kubatana zvinongedzo muprofita yako, asi haufanire kutambisa zviwanikwa zvako kuwana zvimwe zvacho.
Link inopindirana. Sezvatotaurwa, madomeni anobatanidza maviri kana anopfuura evanokwikwidza akakosha zvakanyanya sekutarisira backlink.
Njodzi yechirango. Zvinongedzo zvinouya kubva kune shady mawebhusaiti ane akaonda kana asinganzwisisike zvemukati, matani ezveshambadziro, uye yakaipa mushandisi ruzivo inogona kukuisa iwe mumvura inopisa neGoogle.
Zvichienderana neiyo SEO chishandiso chawakashandisa kuunganidza backlink tarisiro, iwe unozogona kushandisa mamwe kana ese aya ma parameter ari pamusoro kusefa runyorwa rwemashure backlinks. Kutora Moz semuenzaniso, unenge uine DA yesimba remasimba, Spam Score, uye Nzvimbo dzinopindirana:
Mamwe maturusi eSEO anogona kunge aine metriki dzakasiyana kana mazita akasiyana emazita akafanana, asi maitiro acho akafanana. Iwe unofanirwa kusarudza kuti ndezvipi zvikumbaridzo zvako (semuenzaniso webhusaiti webhusaiti> 60; chirango njodzi> 50) uye sefa zvaunotarisira maererano. Gadzirisa zvigadziro zvako kusvikira iwe wasara uine huwandu hunogutsa hwetarisiro uye urwu ndirwo runyorwa rwako.
4. Tanga Kushambadzira Campaigns
Iye zvino zvaunenge uine pfupi pfupi yeanogona-epamberi tarisiro, inguva yekuona kuti ndeupi wavo achazoda kuitisa yako backlinks.
Nhanho yekutanga mumushandirapamwe wako wekuparadzira ndeyekupatsanura tarisiro yako muzvikamu zvakasiyana uye sarudza nzira kwayo yekuvaka kutaurirana nechikamu chimwe nechimwe. Vhura iwo mapeji awakatora kune ako mapfupi, uye tarisa kuti ndeapi chaizvo ma backlink akaiswa pane iro peji. Segment the tarisiro zvinoenderana neiyo backlink mamiriro.
Iyi ndiyo mienzaniso yezvingaite mamiriro e backlink.
mabhizinesi evabatsiri zvikamu;
Kana iwe uri kushandisa yakatsaurirwa yekuburitsa software, iwe ungangodaro unokwanisa kumaka ako tarisiro ipapo ipapo. Kana zvisina kudaro, teedzera iyo backlink tarisiro domains kune yeExpcel spreadsheet, uye maka mamaki mune anotevera ikholamu:
Iwe unogona ipapo tarisa tarisiro yako muzvikamu, tsvaga ruzivo rwekuonana, uye tanga yako yekufambisa. Sarudza iyo email template zvinoenderana nerudzi rwekutarisira, uye utaure zvakananga zvauchazokumbira, uye nezvauchapa mukudzoka.
Rangarira kugadzira yako yekushambadzira meseji iwe pachako. Vanhu havadi mabhii-akafanana, uye kazhinji vanoabvisa vasina kuverenga.
chitsamba: Kuongorora zvaunotarisira kunokupa mumwe mukana wekutarisa mawebhusaiti avo kuti akodzere here uye mhando uye kubvisa mamwe tarisiro kubva pane akanyorwa. Zvakare, kana iwe ukaona kuti mamwe mawebhusaiti madhairekitori ebhizinesi, webhu 2.0 mawebhusaiti, kana dzimwe nzvimbo kwaunosununguka kugadzira zvemukati, hapana chikonzero chekusvika kwavari. Vafambise kune rakasiyana runyorwa uye isa ako ega backlinks mune chero fomati inodiwa.
5. Ongorora Yako Backlink Mbiri
Kuongorora nhoroondo yako ye backlink kunokutendera kuti uone kana backlinks nyowani dzaita chero shanduko kune ako chinzvimbo chinzvimbo, cherekedza kana chimwe chinhu chikatadza, uye ongorora chero nyaya dzinomuka.
Kuerekana kwoitika kwakaderera-mhando backlinks ndechimwe chezvinhu zvingangoda kutariswa kwako. Inogona kunge iri yakaipa SEO kurwisa nemumwe wemakwikwi ako, kana zvinongedzo zvinogona kuoneka zvine hunyanzvi, kana inogona kunge iri yako SEO agency inotenga yakaderera-mhando zvinongedzo zvewebsite yako. Asi chero chiri chikonzero, kukwira kamwe kamwe mu spammy zvinongedzo kunogona kukwezva kutariswa neGoogle uye kukuwanira iwe chirango. Uye kupora kubva pachirango chakadaro kunogona kutora kubva pamwedzi yakati wandei kusvika, hazvo, kwete.
Kana iwe ukaona kukura kunofungidzira kwenhamba ye backlinks pawebhusaiti yako, ita shuwa yekuongorora kana izvi zvinongedzo zvakanaka kana zvakaipa uye zvinobva kupi. Kana izvo zvinongedzo zvakashata, edza kubata varidzi vewebhusaiti uye uchivakumbira kuti vabvise kana kumboti vateedzere zvinongedzo. Kana zvisingakwanise kuitwa, saka unogona kushandisa Chishandiso cheGoogle disvow kutaurira Google iwe hauna chekuita navo.
Kudonhedza kamwe kamwe mumhando yepamusoro backlinks ndechimwe chinhu chingangoda kutarisisa kwako. Izvi zvinogona kuitika nekuti iro rinobatanidza peji rakaenda kune imwe URL, rakabviswa, zvirimo zvepeji zvange zvachinja, kana backlink yacho pachayo yakabviswa kana kutsiviwa nec link kune waunokwikwidza naye. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kubata backlink mudiwa kuti uone zvakaitika uye kudzoreredza backlink kana zvichibvira.
Usakanganwa kuongorora ako makwikwi 'backlink profiles, futi. Teerera kungoerekana kwazvino kukwira mu backlink huwandu. Kana paine chero, tarisa kwavakabva. Kana iyo tarisiro nyowani ichiita seyechokwadi, funga kuisanganisira iwe mukusvikira kwako, futi.
Kukwikwidza kuongorora ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekutsvaga mhando yepamusoro yekudzokera shure. Iko hakuna imwe nzira iyo inogona kuendesa iyi degree yekukosha. Uye zvinotungamira zvinopisa futi, nekuti vakwikwidzi vako vakatokwanisa kuisa backlinks yavo ipapo. zvirokwazvo inzvimbo yekutanga kuvaka yako backlinks kana chimwe chinhu chekuyedza kana usati wakambozviedza.
Tags: backlink kuongororabacklink mukwikwidzi kuongororabacklink kusvikabacklink kudyidzanabacklinkingkukwikwidza ongororolink buildinglink-yekuvaka mushandirapamwechinongedzo-chekuvaka kusvikalinkassistantorganic searchSearch Engine Optimizationiyo kuongororaseo masimba